समाचार - स्क्रू प्रेसको सामानहरू कति पटक बदलिन्छ?
धेरै ग्राहकहरूले स्क्रू प्रेसको सामानहरू प्रतिस्थापित गर्न कति पटक सोध्छन् जब उनीहरू यो खरीद गर्छन्? यस्तो देखिन्छ कि यस समस्याको लागि प्रयोगकर्ताको ध्यान धेरै उच्च छ। आज, यस अवसरमा, म तपाईंलाई यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन चाहन्छु।
ध्यानपूर्वक विश्लेषण गर्नुहोस्, तेल प्रेस सामान लगाउने भाग र घटकहरूमा विभाजित गरिएको छ। नामले सlies्केत गर्यो, लगाउने भागहरू भाग हुन् जुन प्रायः प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ, र भागहरू लामो आयु हुन्छ र प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक पर्दैन। तेल मेशिनको लगाउने पार्ट्स र स्पेयर पार्ट्स।
स्क्रू तेल प्रेसको लगाउने भागहरूमा सामान्यतया समावेश हुन्छ: थिच्ने प्रेस, प्रेस स्क्रू, बुशिंग रिंग, बुशिंग, फिड पात, केकको घण्टी, खुर्की, प्रेस बार, आदि।
सर्पिल तेल प्रेस भागहरूमा सामान्यतया समावेश हुन्छ: तेल प्रेस बडी, प्रेस पिंजरा, फ्रेम, आदि।
२0० तेल प्रेसको क्षमता -०-50० टन हो। किन उपचार क्षमता यति कम छ? यो मुख्यतया तेल अनुसार निर्धारण गरिन्छ। उदाहरण को लागी, जब पेंच प्रेस बदाम प्रेस, बदाम को कडाई कम छ, त्यसैले यो प्रेस गर्न सजिलो छ, र मेशिन को लगाव सानो छ। त्यसकारण, सामानहरूको प्रतिस्थापन चक्र लामो छ र प्रशोधन क्षमता ठूलो छ। तरबूजाको दाना थिच्दा, यसलाई शेलले थिचिन्छ। तेलको कठोरता अधिक छ, र तेल प्रेसको प्रेस च्याम्बरको आन्तरिक पोशाक अपेक्षाकृत गम्भीर छ। सामान बदल्ने चक्र छोटो हुनेछ, र प्रशोधन क्षमता तुलनात्मक रूपमा सानो हुनेछ। सामान्यतया, कमजोर भाग बाहेक, स्क्रू तेल प्रेस कुनै समस्या बिना दस भन्दा बढी बर्षमा प्रयोग गरिएको छ। हाम्रो स्क्रू तेल प्रेसका सामानहरू सबै २ 24-घण्टा उच्च-तापमान कार्बन र नाइट्रोजन उपचारद्वारा प्रशोधन गरिन्छ। हामीसँग आफ्नै पेशेवर प्राविधिक कर्मचारीहरू, उन्नत उत्पादन कार्यशाला, व्यावसायिक उत्पादन टीम र बिक्री टीम छन्। १००% ग्यारेन्टी उत्पादन गुणवत्ता र बिक्री पछि सेवा।
स्क्रू तेल प्रेस मुख्यतया प्रेस कक्ष, फ्रेम, गियर बक्स, स्क्रू कुल दूरी र फिड पोर्ट मिलेर बनेको छ। प्रेस शाफ्ट र गियर बक्समा केहि सामानहरू प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छ। यी सामानहरू मुख्यतया स्क्रू शाफ्ट, स्क्रू प्रेस, अस्तर रिंग, बुशिंग, केकको घण्टी, स्क्र्यापर, प्रेस बार, ठूलो र सानो गियर ह्विल, बेयरिंग, शाफ्ट स्लीभ, आदि हुन्। सेवाहरूको लामो समय पछि सामानहरू लगाउँदछन्, केही स्ल्याग, स्ल्याग, वा कम आउटपुट, कुनै सामग्री छैन, त्यो हो, तपाईंको मेसिनको अंशहरू बिरामी छन् र बदल्न आवश्यक छ।
फिचर गरिएका उत्पादहरू, साइटम्याप, सबै उत्पादनहरू तेल प्रेस मेशिन, सानो तेल प्रेस मेशिन, जैतुनको तेल प्रेस, कोल्ड प्रेस तेल मेसिन, तेल Expeller, बीज तेल Expeller,